Polisy & fitaovam-piadiana ara-tafika - Mpanamboatra, fitaovana mpamatsy, polisy China
Radar detection U22 SR223B
Ny asan'ny 1.Product sy ny fampiasana radar SR223 dia ahitana radar 1 maro, boaty fanaraha-maso 1 mifangaro ary 1 turntable. Izy io dia ampiasaina amin'ny fikarohana, fampandrenesana ary famantarana kendrena drôna sivily / kely amin'ny faritra lehibe toy ny fonja, fampirantiana ary toby miaramila. Ny fampahalalana momba ny làlana toy ny toerana, ny halavirana, ny haavony ary ny hafainganan'ny tanjony dia omena. Famaritana ny vokatra 2.Main entana Fepetram-pahombiazan'ny rafitra rafitra Rafitra fitsinjaram-pahefana (scanner machine azimuth + pitch phas ...
Topimaso: ny detector ranona mampidi-doza LT-600 Desktop dia karazana detector ranoka mampidi-doza. Ity teknolojia ity dia nahatratra haavo avo lenta, ny vokatra dia afaka mamantatra rano fisotroana mampivadika, mipoaka ary manimba ary manakana amin'ny fomba mahomby ireo rano misy ranoka mampidi-doza (izay mety hiteraka fandoroana na fipoahana) tsy hiditra amin'ny faritra azo antoka. Izy io dia toeram-pitsapana ilaina amin'ny fiarovana ny tobin'ny gara, ny metro, ny masoivohon'ny governemanta, ny kianja filalaovana ary ny be mponina sy ...
Mpanakorontana mipoaka W38M
1.Overview W38M Mpanaparitaka mipoaka dia ampiasaina matetika amin'ny fanaparitahana ireo baomba na fonosana tsy fantatra. Izy io dia afaka mamaly ny filàna ara-piarovana rehefa mandray andraikitra hiadiana amin'ny fampihorohoroana EOD ny polisy manokana. Ny W38M dia afaka manafoana ny risika ary miantoka ny fiarovana manokana ny polisy. W38M Mpanaparitaka mipoaka dia azo ampiasaina amin'ny toe-javatra izay tsy misy explosive tsy fantatra. Izy io dia fiarovana azo antoka, azo antoka ary matanjaka. 2.Specification habe ： 500mm * 440mm * 400mm lanja ： 21kg halavan'ny mpandefa: 500mm savaivony mpandefa: ...
Ny ampingan'ny manaisotra manaitra dia ampifandraisina amin'ny fanaparitahana acousto-optic, izay manana ny fiasan'ny masony sy ny sonic manaparitaka, ary azo ampiasaina ho toy ny baiko sy toro-lalana. Alefaso ny jiro herin'ny ampinga, ny metatra fampisehoana herinaratra dia mampiseho ny voltage matetika (mampiseho 10 ~ 12V), avy eo azonao atao ny mampandeha ny hazavana mahery, ny onjan'ny feo ary ny hiantsoantso mafy. Ny asa fanaparitahana roa dia afaka miasa misaraka na miaraka. Jereo ...
Rafitra fanamafisam-peo azo entina TS-Micro (fitaovana akustika lava LRAD)
Famaritana momba ny vokatra: Ny fanamafisam-peo azo entina dia fitaovana fiarovana manan-tsaina hanaparitahana ny vahoaka tsy misy mikasika na manimba. Natao hihaonana amin'ny fiasan'ny taktika rehetra na valinteny vonjy maika izay mitaky feo fampitandremana mazava tsara sy hafatra am-peo. Ny fitaovana dia afaka mamoaka tabataba mahery vaika izay tena manahirana ny olona mijanona manodidina azy tsy misy fiarovana. Ity vokatra ity dia hanome rindrambaiko mahery vaika tsy hita maso an'ireo tompon'andraikitra mpampihatra lalàna ...
Ny kitapom-pitaovana tsy misy andriamby dia mampiasa varahina beryllium ho fitaovana lehibe indrindra ary an'ny an'ny vokatra nasionaly IIC. Miasa amin'ny fatran'ny hidrogen 21% izy io ary tsy manapoaka ny entona. Satria ny magnetisman'ny fitaovana varahina beryllium dia zero, ny fitaovana varahina beryllium dia antsoina koa hoe fitaovana tsy misy andriamby, izay mety ho eo amin'ny sahan'andriamby. Fandidiana azo antoka tontolo iainana. Rehefa mandroaka ireo zavatra ireo ny mpiasa, dia afaka misoroka ny ...